Iskaga Jooji Habkaaga U Diyaar Garowga Iska Joojinta
Waxaa laga yaabaa inay jiraan dad yar oo kuu sheega sababta ay tahay inaad iska joojiso nikotiinka, oo waan fahamsanahay inaysan taasi had iyo jeer caawinaad kuu lahayn. Dadka hela sababahooda u gaarka ah ayaa u badan inay ku guleystaan inay isaga joojiyaan si ka dambeys ah. Waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino inaad hesho sababtaada.
Hal hab oo wanaagsan oo lagu bilaabo waa adiga oo ka fekeraya waxa aad ka heli doontid iska joojinta. Eeg tusaalooyinka hoos ku qoran, ka dibna ka fikir sababahaaga. Talo Xirfadle: meel ku qoro si aad naftaada u dhiirrigeliso!
Sababaha badanaa la isaga Joojiyo
Wanaajinta Caafimaadka ee naftaada iyo qoyskaaga
Tamar sii badan
Dhadhankaaga cuntada oo fiicnaado
[Sababtaada halkan ku qor]
Ja-jiin! Iska joojinta waxay ku reebi lacag boorsadaada/jeebkaaga
Xisaabi Lacagta aad Keydisay
Faa’iidooyinka waxay bilaabmayaan daqiiqado kadib markaad iska joojiso
Isbeddellada waxay ku dhacayaan jirkaaga daqiiqado ka dib markaad bilaawdo iska joojinta. Riix jadwalka wakhtiyada si aad wax uga ogaatid faa'iidooyinka aad ku dareemi doontid iska joojintaada.
Cadaadiska dhiigga ayaa hoos u dhici oo garaaca wadnaha oo yaraan
Gacmaha iyo lugahu waxay dareemayaan diirin
Heerka kaarboon moono-oksaydka dhiigga ayaa ku soo noqon heerka caadiga ah
Heerka oksijiinka dhiiga wuxuu dib kor ugu noqon sidii caadiga ahayd (haddii aysan jirin cudurka sambabaha)
Suurtagalnimada wadne xanuunka hoos ayuu u dhacayaa
Dareenka wax urinta iyo dhadhanka ayaa hagaagi
Dhamaadka neerfaha ayaa bilaabaan inay dib u koraan
Dhiig wareegga iyo shaqada sambabbada ayaa hagaagi
Socodka ayaa fududaan
Qufaca, san-xirka, daalka iyo neef-yaraanta ayaa hoos u dhici
Khatarta cudurka xididaha wadnaha ayaa hoos u dhici kala bar marka la barbardhigo dadka sigaarka caba
Shan ilaa 15 sano iska joojinta ka dib, halista istaroogga waxay la mid ahaan dadka aan weligood sigaar cabin
Khatarta kansarka ayaa hoos u dhici kala bar marka la barbardhigo dadka sigaarka caba
Suurtagalnimada yeelashada boogta caloosha ayaa hoos u dhacaya
Khatarta cudurka xididaha wadnaha wuxuu noqon si la mid ah dadka aan waligood sigaar cabin
Khatarta dhimashada waxay la mid noqon si dadka aan weligood sigaar cabin
Sida loo Sameysto Qorshe Iska Joojin
Samaysashada qorshe waxay kaa caawineysaa inaad diyaar noqoto ka hor iyo inta lagu jiro iska joojintaada. Adigoo wata qorshe, waxaad horeyba u haysan doontaa fikrado ku saabsan sida aad uga gudbi laheed caqabadaha kaa hor imaan kara inta aad ku jirto iska joojinta.
Dooro taariikhda iska joojinta – waa sida adigoo naftaada u ballan qaadi.
Ka fikir noocyada taageeridda ee aad u baahan karto. U sheeg qoyskaaga iyo asxaabtaada inaad qorsheynaysid inaad iska joojisid sigaar cabida oo aad weydiisatid inay ku taageeraan.
Ka fikir xaaladaha kuu horseedaaya inaad isticmaasho nikotiinka oo naftaada weydii sida aad u beddeli karto ama uga fogaan karto. Markaad dareento qabashada sigaar cabida, wax kale samee. Damaca/qabasha way ku dhaafi doontaa.
Laba jibaar fursadahaaga ee iska joojinta adigoo lahadlaya tababaraha iska joojinta isla markaana isku day inaad isticmaasho sharooto nikotiinka, xanjo ama lozenges-yada.
Hel Habkaaga Iska Joojinta
Ka dib marka aad hesho waxa aad kuu dhiirrigeliya, waxaa wax caawin kuu ah inaad ka fekerto sida aad u rabto inaad iska joojiso. Waxaan kaa caawini karnaa inaad hesho hab iska joojin ee adiga kuu shaqeeya. Iyo iyadoo la socota taageerid, waxaad laba jibaari kartaa fursadahaaga iska joojinta. Mar kasta oo aad diyaar tahay, halkan waxaan u joognaa caawimaad.